Wednesday 6th November 2019 12:52:42 in Aragtida Dadweynaha by Tafatiraha Guud
28 Maarij, 2019-kii ayuu madaxweyne Biixi taliyaha guud ee ciidanka
Asluubta u magacaabay Axmed-Libaax oo hore u ahaa abaanduullaha koowaad ee Ciidanka Millatariga.
Qiyaastii sagaal dharaarood ka hor geeridii Taliye Fadal ayuu madaxweyne Biixi u magacaabay Faarax Mire taliye ku-xigeenka koowaad ee ciidanka booliska. Taliye Faarax wuxuu hore uga tirsanaan jiray ciidanka Millatariga, markii u dambaysayna wuxuu ahaa hoggaanka hawl-gelinta Milatariga. Waraysiga uu TV-ga Bulsho la yeeshay taliye ku-xigeenkan shalay xilka laga qaaday wuxuu si toos ah taliyahaasi u sheegay inay ciidanka Millatariga iyo kuwa boolisku kala duwan yihiin, balse uu dedaalkiisa isugu geyn doono sidii uu ula qabsan lahaa xirfaddan aanu aqoonta u lahayn ee boolisnimada.
Shan iyo toban cisho kama ay soo wareegin kolkii shalay taliyaha guud ee ciidanka Booliska loo magacaabay Maxamed-Dabagale oo isaguna ka tirsanaa ciidanka Millatariga. Maxaa ka dhalan kara in la Millatariyeeyo ciidanka booliska?
Inta badan xukuumadaha kalitaliska ah boolis kama jiro, ama wuu jiraa ee wax awood ah ma laha, waxa qudha ee la yaqaannaana waa ciidanka Millatariga. Siyaad Barre kalitalisnimadiisa wuxuu ka bilaabay inuu tirtiro awoodda ciidanka booliska oo ah ciidan u tobabaran dhawridda bulshada iyo ilaalinta xuquuda muwaadinka iyo madaxbannaanidiisa, kaliya boolisku waxay u jireen uun magac ahaan. Afweyne wuxuu awooddii isugu soo ururiyay Millatari isu baxay oo qudha, kuwaasi oo ahaa qalabkii uu u adeegsaday cabbudhintii muwaadiniinta iyo inuu sida ugu xun ugu takrifalo xuquuqdooda.
Ciidanka boolisku maadaama oo ay u tobabaran yihiin inay ixtiraamaan xorriyada muwaadinka iyo xuquuqdiisaba, way adag tahay in loo adeegsado cabudhinta bulshada, si ay suuragal u noqoto cabbudhintaasi waa in la tirtiraa awoodda ciidanka booliska iyada oo magaca booliskana loo isticmaalayo waraabe-u-taag ahaan, dalkana la isugu soo reebaa ciidan Millatari oo aan waxba kala socon xaqa muwaadinka iyo dhawridda madaxbannaanidiisa midnaba, kuwaasi oo suuragal ka dhigi kara inuu abuurmo jawiga is cabbudhinta iyo isku tumashadu.
Madaxweyne Biixi wuxuu si aan gabbasho ku jirin u bilaabay tallaabooyin uu ciidanka ugu qaabaynayo hab uu ku cabbudhin karo muwaadiniinta, xuquuqdoonana ugu tuman karo. Waa tallaabooyin uu ku hiigsanayo inuu abuuro ciidan magac ahaan boolis ah, balse run ahaan Millatari ah. Booliska waxa loo tobabaraa inay maxkamado iyo sharci mariyaan cidda ka hor timaadda, halka Millatariga looga tobabaro inay gacantooda ku toogtaan cidda ka hortimaadda. Waa tan sababta runta ah ee uu Biixi u millatariyaynayo ciidanka booliska.
Si uu madaxweyne Biixi u marinhabaabiyo bartilmaameedkiisa ah in ciidanka booliska uu Millatariyaynayo, wuxuu iyagana qas ka dhex abuuray ciidamadii kale ee qaranka. Tusaale ahaan, taliye Fooxle oo ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee booliska wuxuu u beddalay taliye ku-xigeenka ciidanka Asluubta. Sida oo kale qaar ka mid ah hoggaankii hore ee ciidanka Asluubtana wuxuu beddalay ciidanka Badda.
Ixtiraam badan ayaan u hayaa idil ahaan ciidamada kala duwan ee qaranka oo duruufo adag inoogu shaqeeya, balse waynu wada og nahay in aynaan shaandhada baastada u adeegsan karin inay shaaha inoo kala miirto. Labadooduba waa shaandho, balse mid waliba meel buu ku habboon yahay.
Qore: Maxamed Sharma'arke
Xildhibaan Dayib Xuseen Oo Waji Kale U Yeelay Weerarkii Gudoomiye Faysal Cali Waraabe Ku Qaaday Axmed Karaash Iyo Baashe
Madaxweynihii Sheegay Inuu Helay Dawada Coronavirus Oo War Kale Soo Saaray [Gudaha Ka Akhriso]
[War Hadda Soo Dhacay:-] Madaxweynihii Oo Canaan Dhegaha Ugu Jiray Wiilkiisa Oo Halis Xun U Horseeday
Shirweynihii Afraad Ee Xisbiga KULMIYE Oo Markale Dib U Dhacaya Iyo Muddadii U Qorshaysnayd Oo Maalmo Koobani Innaga Xig
[DEG DEG:-] Xukuumadda Biixi Oo Hargeysa Mar Kale Ka Heshay Dad Qaba Cudurka Coronaviruska, iyo Xaaladihii Ugu Dambeey
Ma odhankaro waa ka aqoon daro laakiin waa isyeelyeel iyo masuuliyad-darro kale oo baahsan.
[DegDeg:- ] "Waxaan Diyaar U Nahay In Halka Wasiir Ku Xigeen Ee Aaanu Leenahay Aanu Siino Beelaha Kale" Boqork
[HALIS] Dhakharkii Weynaa Ee Burco Oo Dadkii Ugu Dhimanayaan Oxygen La'aan Iyo Lacagihii Coronavirus Oo La Baafinayo
Sidee Ciidanka Booliska JSL, Uga Soo Baxay, Fulinta Amaradii Xayiraada Qaad Joojinta iyo Go'aamadii Ciida Ee Gudida